Jubbaland oo diiday go,aankii kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya - Tilmaan Media
Jubbaland oo diiday go,aankii kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya
Warqad kasoo baxday xafiiska madaxtooyada Dowlad Goboleedka Jubbaland, ayaa lagu sheegay in go,aanka kasoo baxay Villa Somalia ee Axmed Islaam loogu aqoonsaday madaxwayne kumeel gaar ah uu baal marsan yahay dastuurka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kan Jubbaland.
Sida lagu sheegay qoraalka, dastuurka Dowladda Federaalka wuxuu xaq u siinayaa dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka in ay samaynsan karaan dastuur saldhig u noqon kara dhisamaha maamulkooda
Qoraalka ayaa lag sheegay in Jubbaland lagu aasaasay heshiis ballaaran oo ay gaadheen dadka kunool saddexda gobol ee ay ka kooban tahay, isla markaasna aysan jirin cidkale oo xaq uleh in ay uyeeriso.
Ugu damabayn qoraalka kasoo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyay baaqii iyo go,aanadii kasoo baxay aqalka sare ee baarlamanka waxaana lagu sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada dadaalada loogu jiro qabsoomidda doorashooyinka in ay dalka kadhacaan lafilayo.
Dowladda Federaalka oo Axmed Madoobe u aqoonsattay madaxwaynaha Jubaland.
Jabuuti: Shirka wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?